विचार – radiokaski.com विचार – radiokaski.com
‘गाँस, वास र कपास’ यो प्रत्येक मानिसका मूलभूत आवश्यकता हुन्। यहाँ गाँसको तात्पर्य व्यावसाय अथवा रोजगारलाई मानिएको छ। कपडालाई सुखसुविधाको प्रतीक र वासको तात्पर्य त्यो दुवैबाट प्राप्त हुने सुखलाई समन्वयात्मक रूपले भोग गर्ने र समाजमा…
रातको करिब ११ बजिरहेको थियो प्रमोद चितवन नारायणघाट स्थित एक होटलबाट बाहिर घर जानको लागि निस्कियो । टाढा-टाढासम्म सडक सुनसान थियो, अरु दिनहरूमा प्रमोद बेलुका ८ बजे नै होटलबाट घर जाने गर्थ्यो । तर आज…
इतिहासको कसीमा कांग्रेस नेतृत्व
योजनाविहीन व्यक्ति, संस्था र दलको भविष्य हुँदैन। अग्रजको योगदान भनेको पैत्रिक सम्पत्तिजस्तै हो, त्यसलाई जोगाउन पनि थपिरहनुपर्छ नत्र खिइँदै जान्छ। भनिन्छ– व्यक्तिका जीवनमा अनगिन्ती अवसर आउँछन् तर त्यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ, थाहा पाउन सक्नुपर्छ। संस्थाको जीवनमा…
-डा. मतिप्रसाद ढकाल मान्छेले कति के ग¥यो पिइसक्यो ब्रह्माण्ड नै तन्तनी । हाम्रो बाहुन छामी मख्ख छ अझै टुप्पी जनै कन्धनी ।। २०४५ सालमा धरानको पिण्डेश्वर क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा पढ्दा मैले माथिको भनाइ भानुभक्त…
छुवाछूत वा बिभेदको अन्त्य कहिले होला ?
सौरब श्रेष्ठ कुनैपनी देशमा छुवाछूत वा बिभेदको अन्त्य गर्न सर्बप्रथम ती देशको नागरिकको आर्थिक बिकास गर्न जरुरी हुन्छ । जुन देशको नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ ती देशहरूमा कहिँ जातीयताको आधारमा, कहि वर्णको आधारमा, कहि…
१२ र १४ वर्षीय नेपाली बालकलाई यौन दुराचार गरेका कारण ६३ वर्षका क्यानडाली नागरिक पिटर डग्लस अहिले जेलसजाय भोगिरहेका छन् । काभ्रे जिल्लाको मण्डनदेउपुरमा नेपाली दुई बालकमाथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनी दोषी ठहर भई…
युरोपको बाध्यता, हाम्रो मुर्खता : कहिलेसम्म ?
दीप बहादुर बडुवाल (दीपक) अर्काले यसो गर्या छ म पनि यस्तै गर्छु भन्ने मूर्खतापूर्ण विचारका साथ कहिले सम्म बाँचि रहने हामीहरूले ? के हाम्रो आफ्नो अस्तित्व छैन ? के हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छैन ? कहाँ…